माधव कुमार नेपालको गढ कञ्चनपुरमा समाजवादीलाई धक्का, १२ नेताले छोडे नेपालको साथ
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले ९ भदौमा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाए । यो संगै संसदको ठूलो शक्ति एमाले छिन्नभिन्न भएको छ ।
एमाले फुटले यो क्रम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ । फुट पछि एमालेबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरु, नेता/कार्यकर्ता तितरवितर हुने क्रम जारी छ ।
नेपालको एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउने निर्णयमा उनकै समूहका धेरै नेताले साथ दिएनन् । फुटमा प्रभावकारी नेताहरु एमालेमै रहेका छन् भने नेपाललाई धेरैजसो तेस्रो तहका नेताले साथ दिएका छन् ।
एमाले फुटले माधव कुमार नेपाललाई कञ्चनपुरमा पनि धक्का लागेको छ । एमालेभित्रको गुटबन्दीमा नेपाल समूहको कञ्चनपुरमा दबदबा रहेको थियो । तर एमाले फुटाउँदा माधव कुमार नेपालले त्यो शक्ति गुमाउनु परेको छ ।
‘एमालेभित्रको आन्तरिक संघर्षमा हामी नै बलियो थियौँ । ओली पक्ष धेरै कमजोर थियो ।’ एमाले छोडेका एक नेताले दैनिक सञ्चारसंग भने, ‘एमाले फुट्दा अहिले त्यो शक्ति बचाउन सकिएन । ढिलो होला तर सबै साथीहरु हामीसंगै आउँछन् ।’
एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला कमिटीमा अधिकाँस पदाधिकारी नेपाल समूहका नेता विजयी भएका थिए । जिल्ला नेतृत्वदेखि स्थानीय तह र केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै नेता कार्यकर्ता नेपाल पक्षमा थिए ।
कञ्चनपुरलाई एमाले संगनठभित्रको शक्ति संघर्षमा नेपालको गढ नै मानिन्थ्यो । त्यसैले कञ्चनपुरमा ओली पक्षीय नेताले चुनावमा टिकट पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको एमालेका एक स्थानीय नेता बताउँछन् ।
‘चुनावका बेला नरबहादुर धामी मात्रै ओली समूहका थिए । अरु सबै हाम्रै लाइनका भनेर टिकट दिएका थियौँ ।’ ती नेताले दैनिक सञ्चारसंग भने, ‘तर फुटमा अहिले अधिकाँस एमालेमै रहेका छन् ।’
एमालेको फुटमा कञ्चनपुरमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र सांसद गरेर १२ जना नेताले नेपालको साथ छोडको छन् ।
९ वटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा एमालेले ५ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र ७ वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको थियो ।
तीमध्ये अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुख नेकपा एमालेको फुटको विपक्षमा उभिएका छन् । चुनावताका नेपाल समूहमै रहेका उनीहरुले एमाले फुटमा भने माधव कुमार नेपालको साथ छोडेका हुन ।
भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट, बेदकोट नगरपलिकाका मेयर असोक कुमार चन्द, उपमेयर सुशिला सिंह, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकी उपमेयर तुलसीदेवी हमाल, कृष्णपुर नगरपलिकाका मेयर कर्ण हमाल, उपमेयर रमिता राना, पुनर्वास नगरपालिकाकी उपमेयर शारदा विष्ट, बेलौरी नगरपालिकाकी उपमेयर चित्र कुमारी चौधरी, बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा क्षेत्री र उपाध्यक्ष कमलादेवी कार्की एमालेमै रहेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुखमध्ये पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवन थापा मात्रै नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका छन् । यस्तै दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाकी उपमेयर चिनी गिरी अझै खुलेकी छैनन् ।
कञ्चनपुरमा एमालेका तीन सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ गएका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वामगठबन्धनले कञ्चनपुरका ६ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएका थिए ।
गठबन्धनको भागबण्डामा कञ्चनपुरका ४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एमालेले पाएको थियो भने माओवादी केन्द्रले २ निर्वाचन क्षेत्र पाएको थियो ।
कञ्चनपुरबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका चार प्रदेश सांसदमध्ये तीन सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका हुन । विजयी चारै सांसद एमालेको तत्कालीन नेपाल समूहमा थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट विजयी तारालामा तामाङ्ग, ‘ख’ बाट विजयी कुलविर चौधरी, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट विजयी लालबहादुर खड्का(सामाजिक विकासमन्त्री) एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् ।
चौधरी र खड्काले मंगलवार नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । समाजवादीमा खुलेका तामाङ्गले पनि सोही दिन सनाखत गर्ने तयारी गरे पनि आवश्यक कागजात तयार नहुँदा सनाखत गर्न पाएनन् ।
उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यक्रममा सक्रिय भएर लागेका छन् । एमाले फुटमा कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (क) का सांसद प्रकाश रावलले माधव नेपालको साथ छोडेका छन् ।
पुस ५ गते पहिलो पटक संसद विघटन हुँदा तत्कालीन नेकपामा देखिएको धुव्रिकरणमा उनी माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पक्षमा उभिएका थिए ।
लामो समूहदेखि नेपाल समूहमा सक्रिय रहेका रावलले एमालेको फुटमा भने माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएनन् । उनी एमाले उपाध्यक्ष डा. भीम रावल निकट मानिन्छन् । भीम रावलकै सिफारिसमा सांसद प्रकाश रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातारणराज्यमन्त्री बनेका थिए ।
कञ्चनपुरका दुई जना संघीय सांसद एमालेमै रहेका छन् । यहाँ तीन वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
बामगठबन्धनमा एमालेको भागमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र ३ परेका थिए भने माओवादी केन्द्रको भागमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ परेको थियो ।
तीनै निर्वाचन क्षेत्रबाट बामगठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की बुहारी विना मगर विजयी भएकी थिइन ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी एमाले सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले माधव कुमार नेपालको साथ छोडेका छन् । उनी एमालेभित्रको गुटबन्धीमा तत्कालीन नेपाल समूहसंग नजिक थिए ।
नेपालले एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा भट्टले उनलाई साथ दिएनन् । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद नरबहादुर धामी पनि एमालेमै छन् । उनी ओली निकट मानिन्छन् ।
यस्तै कञ्चनपुरबाट दुई जना समानुपातिक सांसद छन् । तीमध्ये निरुपाल एमालेमै छन् भने विना बुढाथोकी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् । पाल ओली निकट र बुढाथोकी नेपाल निकट थिए ।
कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा संदस्य इन्दु कडरिया विष्ट एमालेमै छन् । उनी नौँ महाधिवेशनदेखि ओली निकट नै छन् ।
कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई केन्द्रीय सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ खुलेका छन् । वि.सं. २०७५ जेठ २ पूर्वको एमाले केन्द्रीय कमिटीमा कञ्चनपुरबाट तीन नेता छन् ।
तीमध्ये रामकुमार ज्ञवाली र विक्रम शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । उनीहरु दुवै जना माधव निकट हुन ।
यस्तै ओली नकिट निरु पाल पनि एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन । केन्द्रीय सदस्यमध्ये उनी मात्रै अहिले एमालेमा छिन् ।